बिज्ञान-प्रबिधि Archives - Page 8 of 22 - Deshko News Deshko News बिज्ञान-प्रबिधि Archives - Page 8 of 22 - Deshko News
अाज वर्षकै चिसो दिन, अाखिर किन भयो ?
काठमाडौँ, पुस १९ आजको दिन यो वर्षकै सबैभन्दा चिसो दिन भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । उपत्यकाको तापक्रम आज २.२ डिग्री सेल्सियसमा झरेको विभागका मौसमविद् वरुण पौडेलले
किन बढ्यो चिसो, देशभरको तापक्रम कति छ ?
तापक्रम घटेसँगै काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर चिसो बढेको छ । शनिबार काठमाडौँकोे न्यूनतम तापक्रम २ दशमलब ८ डिग्रीमा झरेको छ । शुक्रबार ३ दशमलब ४ डिग्रीमा पुगेको थियो । तापक्रम घटेकाले
आज राति मिथुन उल्का वर्षा हुने, के हो मिथुन उल्का बर्षा ?
मंसिर १८ देखि पुस १ गतेसम्म सक्रिय रहने मिथुन उल्का वर्षा आज राति बढी सक्रिय हुने भएको छ । सक्रिय समयमा प्रतिघण्टा १२० वटासम्म उल्का देख्न सकिने नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीले
भोलिदेखि नेपाली बजारमा आउने आइफोन टेनको मूल्य कति छ ?
काठमाडौं, मंसिर १४ नेपाली आइफोन प्रयोगकर्ताहरुका लागि भोलिदेखि आइफोन टेन नेपाली बजारमै उपलब्ध हुने भएको छ । नेपाली बजारमा ६४ जिबीको आइफोन टेनको मूल्य १ लाख ३८ हजार २५६ जिबीको
स्थानीय तहको वेबसाइट र नक्साको पोर्टल सार्वजनिक, हेर्नुस
मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तहलाई सूचना प्रविधिमा आधारित सूचनामैत्री बनाउन तथा सूचना प्रविधिलाई आत्मसात् गरी सुशासन र पारदर्शी सेवा दिन पोर्टलले सहयोग गर्ने बताउँदै स्थानीय तहले आफ्नो
मंसिर १० र २१ गरी दुई चरणमा हुन गइरहेको प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालमा ‘स्पोन्सर’को नाममा मुलुकबाट करोडौँ रुपैयाँ बाहिरिँदै छ । नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली सहज नहुँदा
एनालग टिभी बन्द नगर्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले टेलिभिजन च्यानलका सेवा प्रदायकलाई डिजिटल प्रणाली नअपनाएमा सेवा नै बन्द गराउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
नेपाल टेलिकमले ल्यायो अफर नै अफर, कसरी प्रयोग गर्ने? (तरिकासहित)
नेपाल टेलिकमले ग्राहकलाई समय समयमा उपलब्ध गराएका विभिन्न प्रमोसनल अफरहरुलाई थप तीन महिनाका लागि निरन्तरता दिएको छ । उपभोक्ताहरुले अत्यधिक रुपमा रुचाएकाले यी अफरलाई निरन्तरता दिइएको टेलिकमले जनाएको छ ।
ज्योतिष बलराम उपाध्याय खकुरेल नामाकरण ज्योतिष शास्त्रका आधारमा कसरी न्वारनको नाम राखिन्छ भन्ने हाम्रो आजको मूल विषय हो । ज्योतिष शास्त्रका आधारमा सौरमण्डलको ३६० डिग्रीको भागलाई विभिन्न रुपले विभाजन गरिएको
डायस्पोराविज्ञ राई विकिपिडियामा
स्वतन्त्र विश्वकोश विकिपिडियामा बेलायतको वेल्स निवासी नेपाली साहित्यकार रक्ष राई समावेश गरिएका छन् । आजभन्दा ५३ वर्षअघि नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्ला खोटाङको बुइँपामा जन्मिएका राई डायस्पोराविज्ञका रुपमा परिचित हुनुका साथै